China Industrial Adjustable Ball Valve Lockout Polypropylene Plastika fiarovana vavahady Valve Lockout Devices fanamboarana sy orinasa | RTOA
Industrial Adjustable Ball Valve Lockout Polypropylene Plastika fiarovana vavahady Valve Lockout Fitaovana
Ny valve lockout dia vokatra fiarovana fiarovana Industrial. Vita amin'ny plastika ABS. Mety amin'ny sakan'ny 8mm-45mm ny sakany, atsofohy ny tantaran'ny valizy lolo, alaviro ny fiasan'ny artifisialy ny valin'ny valizy lolo.
Mpanamboatra matihanina ny Lockout Tagout izahay.
Afaka manantena ny ho mpamatsy anao azo atokisana any Shina izahay.
8mm (0.3 '') hatramin'ny 45mm (1.8 '') fantsona
Feature sy fampiharana
* Manoherana ny famakiana sy ny fanaintainana
* Haben'ny ampiharina: manidy vavahady ivelan'ny vavahady amin'ny 2.5cm ka hatramin'ny 33 cm
* Fitaovana: polypropylene maharitra ho an'ny fiatraikany lehibe sy ny fanoherana simika
* Fampiasana: apetraho eo ambonin'ny vavahady vavahady eo anelanelan'ny faritra roa ary apetaho ny hidin-tranonao
Anaran'ny marika: RTOA
Anaran'ny vokatra: Fitaovana Lockout Plug
Loko: Ny loko mena hafa dia mila namboarina
Fitaovana: Vita amin'ny polypropylene maharitra
Tsena: Manondrana indrindra any Amerika atsimo / avaratra, Eropa atsinanana / andrefana.
Fampiharana: Ampiasaina be amin'ny indostria simika, herinaratra, fiara, sns.
Fanamarinana: ISO9001 / OHSAS18001 / CE / taratasy fanamarinana momba ny patanty
Manafaka, mandefa ary manompo
Baoritra taratasy amoron-dranomasina, rivotra na express.
F: Azoko apetraka amin'ny vokatra ve ny volavolako manokana?
A: Mazava ho azy fa manaiky namboarina izahay.
F: Azoko atao ve ny manana santionany alohan'ny filaminana ara-dalàna?
A: Eny, afaka manome santionany amin'ny fitsapana alohan'ny baikonao izahay.
F: Mandra-pahoviana ny fotoana fitarihana?
A: Matetika mitazona tahiry ho an'ny ankamaroan'ny vokatra izahay, ny fotoana itarihana dia 1-5 andro vantany vao mivoaka ny fandoavam-bola. Ho an'ny vokatra namboarina dia maharitra ela kokoa.
F: mpanamboatra ve ianao sa mpivarotra fotsiny?
A: mpanamboatra izahay, manao ny vokatra samirery. Tongasoa hitsidika ny zavamaniry amin'ny fotoana rehetra.
F: Inona ny teny fandoavam-bola?
A: Amin'ny ankapobeny dia ekentsika ny TT sy ny firaisana tandrefana. Ekena koa ny L / C raha toa ka lehibe ny baiko. Teny hafa no mila resahina.
F: Tsy hitako tao amin'ny katalaoginao ireo vokatra tadiaviko. Azonao atao ve ny mampivelatra izany ho ahy?
A: Eny, manana mpikaroka fikarohana sy fampandrosoana izahay. Vonona izahay ny hampivelatra vokatra vaovao ho anao.
Hatramin'ny niorenan'ny orinasa tamin'ny 2012, MRS dia natokana ho an'ny mpanamboatra sy ny fiarovana ny fanidiana fanalahidy mihoatra ny 10 taona.
Ny MRS dia mamatsy ireo vokatra amin'ny jiro fitrandrahana, padlock fiarovana. Fanalahidy fanidiana, fanidiana herinaratra, fanidiana vavahady, fanidiana tariby, kitapo fanidiana, fanidiana pnatika, toeram-pisidiana sns.
MRS dia manana fanamarinana ny CE, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, EX ary ROHS, manana ekipa teknika matihanina izahay, manamboatra vokatra vaovao hatrany izahay ary manaiky ny fanaon'ny mpanjifa.
Teo aloha: Bokotra Push elektrika Switch Lock Lockout
Manaraka: Fitaovana fikojakojana fantsom-by tsy miovaova miaraka amin'ny 4mm & 6mm voahidy
Adjustable Industrial avo lenta vavahady Valve L ...
Safety Polypropylene plastika vavahady Valv ...